ကလေးရေးရာ – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn Wed, 14 Aug 2019 08:13:40 +0000	en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.1.3 http://www.burmesehearts.com/wp-content/uploads/2015/09/cropped-SortingBurmeseNumbersA-32x32.png ကလေးရေးရာ – BurmeseHearts http://www.burmesehearts.com 32 32 ဝါသနာရှင်နှင့် ပါရမီရှင်လေးများအား ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/#respond Wed, 28 Nov 2018 12:04:16 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74771
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9d%e1%80%ab%e1%80%9e%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9b%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%84/feed/0ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကလေးများ မေ့နေရင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/#respond Fri, 21 Sep 2018 14:18:09 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74759
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba/feed/0ကတိဆိုတာ တည်ဖို့ပါ။ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac-%e1%80%90%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%95%e1%80%ab%e1%81%8b/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac-%e1%80%90%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%95%e1%80%ab%e1%81%8b/#respond Wed, 19 Sep 2018 15:03:34 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74753
Promise is promise. ]]>
ဒီနေ့ချက်မယ့် သမီးလေးရဲ့နေ့လည်စာကို သမီးကို ကျောင်းမပို့မီကတည်းက သူဘာစားချင်လဲဆိုတာ မေးထားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း အရမ်းကို မေ့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ သမီးလေးကိုကျောင်းပို့ပြီး အိမ်အသုံးအဆောင်နဲ့ မီးဖိုချောင်အတွက်လိုအပ်တာတွေ တနင့်တပိုးဝယ်လာခဲ့ပြီး အိမ်ရောက်လို့ အထုပ်အပိုးတွေချမှ သမီးလေးမှာတဲ့ ခေါက်ဆွဲကြော်ကျွေးဖို့ ခေါက်ဆွဲမေ့ခဲ့တယ်။ ဝယ်ဖို့ကိုမေ့ခဲ့တာမို့ အိမ်ကနေ တခေါက် ဈေးပြန်ထွက်ဝယ်မှရမှာ။
ဝယ်လာခဲ့တာလေးတွေထဲကပဲ အဆင်ပြေတာ ချက်ကျွေးမလား?
ကျွန်မကတော့ သမီးလေးကို ဒီနေ့သူစားချင်တာ ချက်ကျွေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့မိတာမို့ အပြင်မထွက်ချင် ၊ ထွက်ချင်နဲ့ပဲ ပြန်ထွက်ပြီးခေါက်ဆွဲပြေးဝယ် သမီးကျောင်းပြန်အမီစားဖို့ အိမ်ပြန်ပြေးချက်ခဲ့တယ်။
သမီးကိုကျောင်းကြိုတော့ ကျွန်မဟာ ခေါက်ဆွဲဝယ်လာဖို့မေ့ခဲ့ပေမယ့် သမီးစားချင်တာ ချက်ကျွေးနိုင်ဖို့ ဈေးတခေါက်ပြန်ပြေးသွားပြီး အမီချက်ထားခဲ့တယ်ပြောတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြန်ပြောလာတဲ့ သမီးလေးစကားကိုကြားတော့ ပင်ပန်းသမျှအမောပြေသွားခဲ့တယ်။
ကျွန်မ သမီးကို တိုက်ရိုက်မပြောခဲ့ဘဲ သင်ပေးခဲ့တာကတော့ ကတိဆိုတာ ပေးပြီးရင် တည်ရတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်မဟာ သမီးရဲ့ဆန္ဒကို တလေးတစား အလေးထားလုပ်ပေးတတ်တာကိုလည်း မပြောဘဲသိစေခဲ့တယ်။ ငါအမေပဲ ငါချက်ကျွေးတာ ကလေးစားရမယ်။ သူ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့ ထမင်းဟင်းပန်းကန်ကိုသာ ကလေးစားရမယ်ဆို သူဘာစားချင်လဲ မမေးခဲ့တဲ့အမေဟာ ကလေးဘာအာသီသရှိနေလဲ သိခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ဘာအာသီသရှိလဲလို့ အမေးလဲ မခံရ ၊ အမေးခံရရင် ငါဘာစားချင်သလဲဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးလည်း အလေ့အကျင့်မရှိတော့ တခါတလေ ကိုယ်ဘာစားချင်လို့ စားချင်မှန်းတောင်မသိဘဲ ကျွေးတာလည်း မြိန်မြိန်မစား ဖြစ်နေတတ်တယ်။
ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ အစာအာဟာရကိုမှ ကလေးအာသီသရှိတာ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကာတွန်းကား တနေ့၁နာရီလောက် ပြတဲ့အချိန်လေးမှာတောင် မပြခင် သူဘာကာတွန်းကားကြည့်ချင်တာလဲ ၊ ဒီနေ့အိမ်စာအဖြစ် ဘာသင်ယူချင်တာလဲ ၊ ဘယ်သွားချင်တာလဲ ၊ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ စသဖြင့်ကို အဖွင့်မေးခွန်းအနေနဲ့ ကလေး သူ့စိတ်သူပိုနားလည်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးလာခဲ့တာ ခုဆို ငါးနှစ်တောင်ရှိပြီပေါ့။
အကျိုးရလဒ်ကတော့ ကလေးဟာ မိဘစီစဉ်ပေးတာကိုပဲ မလုပ်ချင် လုပ်ချင်လုပ်နေ ၊ မစားချင် စားချင်စားနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ ကိုယ်ဘာလိုချင်လဲဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသားသိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကို ရပါတယ်။ ကလေးဟာရေရှည် သူစိတ်ပါဝင်စားရာ လုပ်ကိုင်နေပါမှ သူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုယ် တရှိန်ထိုးတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရနေတာလည်း မလိုချင် ၊ ဘာလိုချင်မှန်းလည်းမသိ ၊ ကိုယ်လုပ်နေရတာကိုလည်း စိတ်မဝင်စား ၊ ဘာကို စိတ်အားထက်သန်နေမှန်းမသိ ၊ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကို ဝါသနာပါမှန်းမသိ ၊ ကိုယ်ဘယ်အရာမှာ အားသန်နေမှန်းမသိရင် ခက်ရချည်ရဲ့နော်။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%90%e1%80%ac-%e1%80%90%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%96%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%80%95%e1%80%ab%e1%81%8b/feed/0မမြင်နိုင်သော အားနည်းချက်များ၏နောက်ကွယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/#respond Wed, 05 Sep 2018 10:10:27 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74738
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%b9%e1%82%8f%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%a1%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba/feed/0စာရေးသူနှင့် Report Card http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-report-card/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-report-card/#respond Thu, 14 Jun 2018 16:42:27 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74722
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%8f%e1%80%bd%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7-report-card/feed/0မှန်မှန်တိုးတက်သော ကလေးများဖြစ်စေချင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8/#respond Wed, 13 Jun 2018 15:52:20 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74714
ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတယ်ဆိုတာ ဆေးပူဖောင်းမှုတ်နေရသလိုပဲ။ ညင်ညင်သာသာ မှုတ်နေရင်းက ဘယ်နေရာကပေါက်ပြီး လေတွေထွက်နေသလဲ ၊ ဘာကြောင့် ကိုယ်မှုတ်တဲ့ ပူဖောင်း မကြီးလာရသလဲဆိုတာလည်း မှုတ်နေရင်းက အဖြေရှာတတ်ရတယ်။ လေမှုတ်နေတာ ဘယ်အချိန် ရပ်သင့်သလဲဆိုတာလည်း သိရမယ်။ မသိဘဲဆက်မှုတ်နေရင် ပူဖောင်းပေါက်ပြီး အရာမထင်ဖြစ်တတ်တာမျိုးပါ။]]>
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8/feed/0သူများပြောရင်ယုံမှာလား http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/#respond Mon, 20 Mar 2017 02:13:31 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=74079
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%ac%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%9a%e1%80%b6%e1%80%af%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80%b8/feed/0ကလေးတွေ ပျော်ပျော်လေး သင်ယူစေချင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8-%e1%80%9e/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8-%e1%80%9e/#respond Wed, 01 Mar 2017 09:06:36 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73980
မိဘတွေက ကလေးတွေကို စာတော်စေချင်တယ်။ တတ်စေချင်တယ်။ ဒီတော့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ခိုင်းတယ်။ မိဘတွေက တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုပ်ခိုင်းလေလေ ၊ ကလေးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပိုလာလို့ စိတ်လုပ်ရမှာကြောက်လာလေလေ ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာနဲ့ ကလေးဖြစ်နေတာတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
စာလုပ်ရမှာကြောက်တဲ့ကလေးဟာ စာဘက်ထူးချွန်လာနိုင်ပါ့မလား။ လူကြီးမိဘ နဲ့ ဆရာသမားတွေကို ကြောက်လွန်းလို့ ၊ မလွန်ဆန်နိုင်လွန်းလို့ သူတို့ဖြစ်စေချင်သလို နင်းကန်ကြိုးစားလိုက်ရပေမယ့် အဲဒီရလဒ်အပေါ် မပျော်ပိုက်ကြတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေလည်း အများအပြားရှိကြပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက ကလေးကို သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်အပေါ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လုပ်သွားတတ်ဖို့ ၊ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူတတ်ဖို့ လူကြီးမိဘ ၊ ဆရာသမားတွေက သင်ပြပေးသင့်တာပါ။ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာတာပါ။ သင်ယူမှု အစခရီးမှာကတည်းက ကလေးဟာ သင်ယူရမှာ ကြောက်နေပြီ ၊ မပျော်မွေ့ဘူး ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ခံစားနေရပြီဆိုရင် သင်ယူရမှာ သူမလိုချင်တော့ဘူး။ ဒီလိုဆို သူ့အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ သူကြိုးစားတာမျိုး ၊ လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ပညာသင်ယူတာမျိုးတွေ ကလေးမှာ ဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲ။
ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက မူလတန်းအရွယ်အထိ စာဘက်မှာ မထူးချွန်ခဲ့ဘူး။ စတက်ခဲ့ရတဲ့ မူကြိုကျောင်းမှာကတည်းက စာဆိုရင်ကြောက်သွားခဲ့တာဟာ သင်ပေးတဲ့ ဆရာမတွေရဲ့ ဆူပူငေါက်ငမ်းနေတဲ့အသံတွေ ၊ လူမသိသူမသိ ပေါင်တွင်းကြော လိမ်ဆွဲခံခဲ့ရတာတွေ ၊ ကိုယ့်ထက် အတန်းကြီးတွေကို စာမရရင် ပေတံနဲ့ ဗျင်းနေတာတွေ ၊ အဆူခံ အရိုက်ခံရလို့ တဝါးဝါးငိုနေတဲ့ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူအသံတွေကြောင့် ငါလည်း တနေ့ ဒီနေရမှာ ဒီလိုအရိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေး ဝင်လာပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မ မူကြိုကတည်းက ကျောင်းသွားရမှာ ကြောက်တယ်။ ကျောင်းသွားရမယ့်အရေး အိမ်ကတည်းက ငိုလာလိုက်တာ ကျောင်းရှေ့ရောက်တဲ့အထိပဲ။ ဆရာမတို့မိသားစုကိုမြင်ရင် မငိုရဲဘူး။ တိတ်သွားတယ်။ တိတ်တယ်ဆိုတာ ငိုလို့အဆော်ခံရတော့မှာကိုသိလို့ ဆက်မငိုရဲဘဲ တိတ်သွားရတာ။ ဒါကို ကျောင်းလာပို့တဲ့ လူကြီးမိဘက မသိဘူး။ ပြန်ပြောပြလည်း မထူးဘူး။ ဆိတ်ရာ ၊ ရိုက်ရာတွေပါလာလည်း အဲဒီခေတ်က ကိုယ့်ကလေးဆိုးလို့ဗျင်းတာ နာနာဗျင်းမှ မြန်မြန်တတ်မှာလို့ မှတ်ယူကြတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ မထူးဘူး။
မူကြိုကနေ ကျောင်းတက်ရတဲ့အရွယ် ကျောင်းမှာ ဆရာ ၊ ဆရာမတွေကလည်း လက်သံပြောင်တယ်။ အရိုက်ခံရမှာ ကြောက်စိတ်နဲ့ စာတော့လုပ်တယ်။ ကိုယ့်တော့ အရိုက်ခံမထိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းစာအပေါ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ သိပ်များခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများခဲ့သလဲဆို စာမေးပွဲရှိတယ်ဆိုတာ သိရတဲ့နေ့မှာ တခါဖျားတယ်။ စာမေးပွဲနီးရင်ဖျားတယ်။ အောင်စာရင်းထွက်တော့မယ့်အချိန် တခါဖျားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မမူလတန်းအရွယ် (လေးတန်းအထိ) အဖျား သံသရာလည်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပါ။
အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းအရွယ်မှာတော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို စာဘက်ထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တယ်။ စာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ခံနေရတဲ့ကိုယ်ကို စာတွေကျက်မှတ်ရင်း ပြန်ထွက်ပေါက်ပေးလိုက်တော့ စာဘက်မှာထူးချွန်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကတော့ မပျောက်သွားဘူး။ ဘယ်မှာသိသာသလဲဆို စာမေးပွဲရှိတိုင်း ၊ စာမေးပွဲနီးတိုင်း ၊ အမှတ်စာရင်းတွေပြောတိုင်း ၊ နောက်ဆုံး ဆုတက်ယူဖို့ ဖိတ်စာတွေ ပေးတဲ့အခါမှာ စိတ်လှုပ်ရှားလွန်ပြီး ဖျားတာမပျောက်သွားခဲ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့တက္ကသိုလ်မှာ ဘွဲ့တခုရဖို့ စာတွေထပ်ကျက်ရပြန်ရော။ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်တက်ဖို့ စာတွေ ဆက်လေ့လာရ ဆက်တက်ဖြစ်တော့လည်း စာတွေဆက်ကျက်ရနဲ့ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ကျွန်မကို အလိုချင်ဆုံးဆုတစ်ခုတောင်းပါဆိုရင် စာတွေကျက်ရခြင်းရဲ့ဒုက္ခကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းမိမှာပါ။
အခုလို ကိုယ်တကယ်နားလည်လာတဲ့အချိန် ဒီလိုဆုတောင်း ဘာကြောင့်တောင်းချင်သလဲဆို ကျွန်မဟာ စာတွေကို လိုလိုချင်ချင် ကျက်မှတ်လေ့လာခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ခဲ့လို့ဆိုတာ သိလာခဲ့တယ်။ နင်လားဟဲ့သရဲ ငါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လိုမျိုးနဲ့ နင်လားဟဲ့ ငါ့ကိုလန့်စေတဲ့စာ နိုင်အောင်အလွတ်ကျက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့် ဒီဒုက္ခနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တာ။
ဒီလိုသိနားလည်လာတော့ ကိုယ့်သားသမီးဆိုတာများရှိလာခဲ့ရင် ဖိအားပေးမှုတွေကင်းတဲ့သင်ခြင်းတွေနဲ့ ကိုယ်က အစပျိုး လေ့ကျင့်သင်ပေးမယ်။ ဖိအားပေးမှုတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းတဲ့ ကျောင်းပညာရေးစနစ်ကောင်းကောင်းမှာ ကျောင်းထားမယ်။ သူလေ့လာတာဟာ သူလိုချင်လို့ လေ့လာတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေရမယ်။ ဖိအားကြောင့် ကြောက်ကြောက်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြီးစွာ လေ့လာရတာမျိုး မဖြစ်စေရဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တယ်။
ကျွန်မသမီးကလေးကို ဟောဒါမျက်လုံး မျက်လုံးကဘာလုပ် ၊ ဟောဒါနှာခေါင်း နှာခေါင်းကဘာလုပ် ၊ ဟောဒါနား နားကဘာလုပ် စသဖြင့်ကို အမူအရာ ၊ ဟာသတွေပြောပြီး သူပါလိုက်လုပ်တတ်အောင် အိမ်မှာစသင်ခဲ့တယ်။ ကစားရင်းသင်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲသင်ခဲ့တယ်။ သင်တာကို သင်တာမှန်းမသိစေပဲ တတ်သွားရအောင် သင်တယ်။
စာအုပ် ၊ စာပေတွေကို ချစ်တတ်အောင် သူလသားလေးကတည်းက အဝတ်စနဲ့လုပ်တဲ့ လျှော်ဖွတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေကနေ ၊ ပကျိ ပကျိ အသံမြည်တဲ့ စာအုပ်တွေ ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းအစုံနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ အပြည့်အစုံ ဝယ်ထားပြီး ကျောင်းမှာ သူတွေ့မြင်နိုင်တာတွေကို အိမ်မှာကတည်းက ရင်းနှီးအောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်ခွဲဆိုတဲ့အရွယ်မှာကတည်းက ကျောက်သင်ပုန်း အဖြူ ၊ အမည်း ၊ ရေးခြစ်စရာစာအုပ် ၊ သူစိတ်ဝင်စားရာရာစာအုပ်တွေ တင်ထားတဲ့စင် ၊ ရောင်စုံခြယ်နိုင်ဖို့ မြေဖြူရောင်စုံ ၊ ကျောက်တံ ၊ ရောင်စုံခဲတံတွေကိုလည်း ဝယ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအရွယ်ဟာ နားမလည်တတ်သေးတော့ ပစ္စည်းအများစုဟာ ပျက်စီးပါတယ်။ စာအုပ်တွေဆိုရင် ကတ်ထူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေတောင် စုတ်ပြဲတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးကို မဆူခဲ့ဘူး။ စာအုပ်ဟာ ရေးခြစ်စရာ ၊ ဖတ်စရာ ၊ စာအုပ်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်ပဲ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။
နှစ်နှစ်ခွဲ သုံးနှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်မှာ သူဟာ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်။ ဒီ့မတိုင်မီမှာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေ ၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့အရာတွေကို ကစားရင်း ၊ လမ်းသွားရင်း ၊ ကြုံကြိုက်ရင်း သင်ခဲ့တာတွေပါ။ စာရယ်လို့ တိတိကျကျ ထိုင်သင်တာမျိုး ကလေးလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကိုယ်လည်း ဖိအားပေးလို့ မလုပ်ဘူး။ သုံးနှစ်ကျော်လာတော့ သူရင်းနှီးနေတဲ့ စာအုပ်တွေကို အမေ့ဆီယူလာပြီး ဖတ်ပြခိုင်းတာမျိုး ။ သူကိုယ်တိုင် လိုက်ဖတ်တာမျိုးတွေ လုပ်လာတော့ သင်ပေးရကောင်းလာတယ်။
သုံးနှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာဆို ရောင်စုံခဲတံတွေနဲ့ အရေးစတာမျိုးတွေ သူ့ဘာသူ လုပ်လာတယ်။ ဥပမာ – ၀ ကိုခပ်ကြီးကြီးဝိုင်း မျက်လုံးတွေထည့်ပြီး မျက်လုံးလို့ သူ့ဘာသာသူပြောရင်းဆွဲတာမျိုး ၊ မျက်ခုံးထည့်ပြီး မျက်ခုံးလို့ပြောတာမျိုး၊ နှာခေါင်းထည့်လို့ နှာခေါင်းလို့ပြောတာမျိုး၊ ပါးစပ်ပုံဆွဲပြီး ပါးစပ်လို့ပြောတာမျိုးတွေပါ။ ကျွန်မရဲ့သင်ကြားနည်းကတော့ ကလေးကို သင်လို့ သင်နေမှန်းမသိအောင် ကစားရင်းသင်တယ် ။ ပုံဆွဲရင်းသင်တယ်။ တဆင့်ချင်းစီ ခပ်လွယ်လွယ်လေး သင်ပေးသွားတာပါ။
ခပ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ကစားသလို ၊ ပုံဆွဲသလိုမျိုး တဆင့်ချင်းစီသင်သွားတော့ သင်ယူနေရတာတွေဟာ သူ့အတွက် မခက်ခဲဘူးဖြစ်လာတယ်။ ဘာဟာ ဘာဆိုတာ သူကောင်းကောင်းနားလည်လာရင် သူသိပြီးသား အကြောင်းအရာတွေထဲက ခပ်လွယ်လွယ် စာလုံးပေါင်းနိုင်တာတွေကို ဦးဆုံးသင်ပေးတော့ ကလေးဟာ စာလုံးပေါင်းတွေပါ ရင်းနှီးလာတယ်။ ရေးတတ်လာတယ်။ ဘာကိုမှ ဖိအားပေးမသင်ပေးခဲ့ရဘူး။
ကလေးကိုစာသင်ရင် ကြိမ်လုံးသို့မဟုတ် ပေတံနဲ့ ထောက်ပြသင်မှ ကလေးအာရုံစိုက်မယ်လို့ ယူဆရင်လွဲနေပါပြီ။ ကျွန်မကလေးကို စာသင်ရင် ဘယ်တော့မှ ကြိမ်လုံးမသုံးသလို ပေတံလည်းမဆောင်ဘူး။ ပထမအကြိမ် သူ့ကိုသင်ရင်းကိုယ်ပါလိုက်ရွတ်တယ်။ နောက်တကြိမ်သူ့ကို တစ်ယောက်တည်း စာလုံးတစ်လုံးချင်းစီထောက်လို့ လိုက်ရွတ်စေတယ်။ ဒါကို ကလေးအများစုက လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုရွတ်ပြီးနောက်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကစားနည်းမရှိရင်ပေါ့။
သမီးလေးကတော့ ကျွန်မနဲ့ရွတ်ပြီး သူ့တစ်ယောက်တည်း ရွတ်ရမယ့်အချိန်ဆိုလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လိုက်ရွတ်တယ်။ သူရွတ်ပြီးရင် အမေ့ကို သူပြန်သင်ရမယ့်အလှည့်လေ။ သူထောက်တာကို ကျွန်မက တပည့်တစ်ယောက်လို လိုက်ရွတ်တယ်။ သူ့အဖေရှိနေတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မကို စာထောက်မေးပြီးရင် သူ့အဖေကိုပါ စာထောက်ပြီးမေးတယ်။ သူ့အဖေကလည်း တလေးတစား တစ်လုံးချင်းစီကို ပြန်ရွတ်ဖြေတယ်။ အဲဒီတော့ ကလေးဟာ ဆရာမတလှည့်စီလုပ်တဲ့ ဒီလိုကစားတဲ့နည်းနဲ့တင် လေးခေါက်မှတ်မိသွားတာပေါ့။ ခပ်များများ ကစားပြီးရွတ်လေ ခပ်များများ ဦးနှောက်ထဲစွဲလေမဟုတ်လား။
ကလေးဟာ ကစားရင်း ၊ ဆရာလုပ်ရင်း ၊ အရောင်ခြယ်ရင်း ၊ အမေပုံဆွဲသင်တာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရင်း စာတွေရသွားတော့ စာသင်လို့ သင်နေမှန်းမသိဘဲ ကစားနေသလိုဖြစ်နေတာမို့ စာသင်ရတာ ပျော်မွေ့လာပါတယ်။ စာရေးရတာ ၊ စာလုံးပေါင်းတွေ မှတ်ရတာကိုလည်း ပျော်မွေ့လာတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျောင်းကဆရာမတွေကလည်း ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်သင်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက် စာလုပ်ရမှာပျော်တဲ့ကလေးဟာ ကျောင်းသွားရမှာလည်း တက်ကြွနေတယ်။ ကျောင်းနေပျော်မှ စာတော်မှာလေ။
အရင်းစစ်လိုက်ရင် လက်ဦးဆရာဟာ မိနဲ့ဘပါ။ အိမ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနည်း ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စပြီးလေ့လာခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဆို အဲဒီလို လေ့လာခြင်းမှာ ကလေးဟာ ပျော်မွေ့လာမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းရွေးမှန်ပြီး ကျောင်းမှာလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင် ကလေးဟာ လေ့လာသင်ယူခြင်းမှာ အားသန်လာပါလိမ့်မယ်။
လေ့လာသင်ယူမှုမှာ အားသန်လာတဲ့အခါ ရည်မှန်းချက်ကြီးရင်ကြီးသလောက် ထွန်းပေါက်မယ့်သူဖြစ်လာမှာပါ။ တကယ်ဆို လေ့လာမှုခရီးအစမှာကတည်းက စိတ်ဖိစီးမှုကင်းစွာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လေ့လာခွင့်ရဖို့ အထူးအရေးကြီးလှပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်းဟာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်း မြဲမြံခိုင်မာသွားရင် နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတွေ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ၊ အောင်မြင်မှုတွေ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာလှမ်းရင်း ခရီးပန်းတိုင်အရောက် ချီတက်နိုင်မှာပါ။
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc-%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8-%e1%80%9e/feed/0ရိုးစင်းသော ကလေးတို့၏ပျော်ရွှင်မှု http://www.burmesehearts.com/%e1%82%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%81%8f%e1%80%b1%e1%80%95/ http://www.burmesehearts.com/%e1%82%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%81%8f%e1%80%b1%e1%80%95/#respond Sat, 18 Feb 2017 11:43:10 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73893
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%82%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80%ac-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%82%94%e1%81%8f%e1%80%b1%e1%80%95/feed/0မိခင်စိတ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%ad%e1%80%81%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9/ Sun, 12 Feb 2017 06:52:46 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73637
မိခင်မဖြစ်သေးသူတွေ ၊ မိခင်နေရာ မရောက်သေးသူတွေက မိခင်စိတ်ဆိုတာကို အတိအကျ နားလည်ခံစားနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကျွန်မငယ်စဉ်ကတည်းက ကလေးချစ်တတ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒီချစ်စိတ်နဲ့ မိခင်နေရာရောက်လာတော့ မိမိသားသမီးကို ချစ်စိတ်ဟာ မတူပါဘူး။ ခံစားမှုတွေပိုလေးနက်လာသလို တာဝန်တွေလည်း ပိုရှိလာတာပါ။ ကျွန်မရဲ့မူရင်းစိတ်ဟာ ကြိုမပူတတ်ပေမယ့် ကြိုပြင်ဆင်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် အပူလည်း နည်းသူပါ။ ဒါပေမယ့် မိခင်နေရာရောက်လာတော့ အရင်နဲ့မတူ စိုးရိမ်ပူပင်မှုတွေရှိလာပါတယ်။ သားသမီးအတွက် ကြိုတွေးပူတတ်လာတာပါ။ ကိုယ်ဝန်စလွယ်ထားရတာ သိကတည်းက ကလေးဟာ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းစွာ မွေးဖွားလာဖို့ ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်တွေ ပြုရပြီ။ မီးဖွားစဉ် မတော်လို့ ကိုယ်ချွတ်ချော်သွားရင်ဆိုတာလည်း တွေးပူတတ်လာခဲ့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ ရွှေကို မခုံမင်တတ်တဲ့ကျွန်မ အဲဒီကတည်းက ရွှေတွေစစုကျင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဆိုတာမျိုးက ရှိရင်တန်ဆာ ၊ မရှိရင်ဝမ်းစာ လုပ်လို့ရတယ်လေ။ ကိုယ်မလိုတဲ့အချိန် ထုခွဲရောင်းချလို့ရတာမို့ ငွေပိုငွေလျှံလေးရှိတိုင်း သမီးလေးလည်း ဝတ်ချင် ဝတ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိအောင် ၊ နောင် အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဒါတွေထုတ်သုံးနိုင်ဖို့ […]]]>
]]> ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်ငယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%84/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%84/#respond Tue, 24 Jan 2017 07:23:47 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73523
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%84/feed/0စင်္ကာပူပညာရေးစနစ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%85%e1%80%80%e1%81%a4%e1%80%ac%e1%80%95%e1%80%b0%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%ac%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80%85%e1%80%94%e1%80%85%e1%80%b9/ Fri, 20 Jan 2017 02:14:35 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73510
]]> ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးရဲ့မိဘများ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95%e1%80%99/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95%e1%80%99/#respond Thu, 19 Jan 2017 03:12:05 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73504
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%a1%e1%80%9b%e1%80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%b2%e1%82%95%e1%80%99/feed/0မူကြိုတက်စ ကလေးငယ် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9/#respond Wed, 18 Jan 2017 05:23:15 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73491
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%99%e1%80%b0%e1%82%80%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%b3%e1%80%90%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%85-%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%84%e1%80%9a%e1%80%b9/feed/0ကလေးကိုသင်ပေးတဲ့အခါ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ab/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ab/#respond Wed, 11 Jan 2017 10:07:57 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73469
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9e%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%95%e1%80%b8%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%81%e1%80%ab/feed/0အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ကလေးကိုသင်ပေးဖို့ ကနဦးလိုအပ်ချက်များ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%80%e1%80%b1/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%80%e1%80%b1/#respond Mon, 09 Jan 2017 08:03:03 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73455
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%a1%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b7%e1%80%a1%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b7%e1%80%b1%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%b8-%e1%80%80%e1%80%b1/feed/0ကလေးကို စိတ်ပါလက်ပါ အစာစားစေချင်ရင် http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85/#respond Sun, 08 Jan 2017 05:43:05 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73432
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af-%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab%e1%80%9c%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%95%e1%80%ab-%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85/feed/0ကလေးတွေအတွက် အဓိကကျတဲ့အရာ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%93%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%93%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1/#respond Fri, 23 Dec 2016 01:52:14 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=73312
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%80%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%a1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%80%e1%80%b9-%e1%80%a1%e1%80%93%e1%80%ad%e1%80%80%e1%80%80%e1%80%ba%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%a1/feed/0သိတတ်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးမလဲ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/#respond Thu, 03 Nov 2016 00:26:51 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71173
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%9e%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%99%e1%80%ae%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%85%e1%80%b9/feed/0ခြားနားမှုတွေရှိနေတဲ့ မိဘနှင့်သားသမီး http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad/ http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad/#respond Wed, 02 Nov 2016 11:41:02 +0000 http://www.burmesehearts.com/?p=71143
]]> http://www.burmesehearts.com/%e1%80%bb%e1%80%81%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%94%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%99%e1%82%88%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%9b%e1%80%bd%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%94%e1%80%90%e1%80%b2%e1%80%b7-%e1%80%99%e1%80%ad/feed/ 0